Pope ee Mozambique, Madagascar iyo Mauritius horraantii Sebtembar - TELES RELAY
ACCUEIL » International Pope ee Mozambique, Madagascar iyo Mauritius horraantii Sebtembar
Pope ee Mozambique, Madagascar iyo Mauritius horraantii Sebtembar
Pope Francis wuxuu dhigayaa Saint Peter 27 March 2017. VINCENZO PINTO / AFP
Vatican ayaa ku dhawaaqday Arbacada, March 27, in Pope Francis uu ka dhigi lahaa safar lix maalmood ah oo loo geynayo Mozambique, Madagascar iyo Mauritius horraantii Sebtembar.
"Pope Francis wuxuu ka dhigi doonaa safar masaafo ah Mozambique, Madagascar iyo Mauritius, laga bilaabo 4 ilaa 10 September, booqanaya magaalooyinka Maputo ee Mozambique, Antananarivo ee Madagascar iyo Port Louis ee Mauritius"ayaa ku dhawaaqay hadal ka soo kordhay Quraanka Kariimka, kaas oo faahfaahin doona barnaamijka baadari kaddib.
Sidoo kale akhri Mozambique: Daacuunka waa in uu si deg deg ah u fido kadib markii Hurricane Idai
Safar gaaban oo loo geystay Mozambique iyo Madagascar kuwaas oo lagu soo waramayay bilihii dhawaa, laakiin marka lagu daro Mauritius ee Badweynta Hindiya waa la yaab.
"Waxaan sheegaa xanuunka"
Imaanshihiisa Mozambique waxay qaadataa tilmaan gaar ah ka dib burburkii Hurricane Idai ee dhowr dal oo koonfurta Afrika laba asbuuc ka hor.
Mozambique on Wednesday xaqiijiyay muuqaalka baqdo daacuun ee gobolka Beira (dhexda), halka duufaantu ku dhinteen ku dhawaad ​​500 dhimasho iyo boqolaal kun oo guri la'aan dalka.
"Dadkaan i jeclaa, waxaan sheegaa xanuunka iyo qoyskayga"Pope Francis ayaa sheegay in inta lagu jiro dhegeysiga on St. Peter ee toddobaadkii hore.
Mozambique, mid ka mid ah dalalka ugu saboolsan dunida waxay mar hore ku dhacay daadad 2000 lahaa 800 dhintay iyo ugu yaraan 50 000 guri la'aan dilaaga ah.
Sidoo kale akhri Mozambique, Malawi iyo Zimbabwe: Idai, duufaan aan xuduud lahayn
Dhamaadkii bishii Febraayo, wadaad caan ah oo Mozambican ah ayaa xaqiijiyay booqashada ay ku tagtay Mozambique, oo ah booqashadii koowaad ee baadari koonfurta afrika ee tan iyo 1988. Pope John Paul II ka dibna wuxuu arkay arxan-darrada dagaal sokeeye oo dheer.
"Waxaan kuu sheegi karaa qarsoodi (...), sannadkan waxaan heli doonaa booqasho gaar ah. Pope Francis ayaa halkan nala joogi doonaa sanadkan », ayaa shaaca ka qaaday in Giorgio Ferreti, oo ah wadaadka Mashruuca Cathedral ee Maputo in uu aaminsan yahay caasimadda Mozambican.
Madaxwaynaha Mozambican Filipe Nyusi ayaa ku martiqaaday qabsashadii intii uu socday booqasho Vatican bishii Sebtembar 2018 wuxuuna ku dhawaaqay safarka suurtagalka ah ee suxufiyiinta. "Haddii aan weli noolahay"baadariga ayaa laga yaabaa inay ku jawaabaan cod aqbalaya.
Mozambique, oo horay u ahaan jirtay Gobalka Portugal, ayaa ku saabsanaa 4 million Catholics. Ku saabsan 22% dadka Mozambique waa Muslim.
"Saboolnimo aad u daran"
Cardinal Madagascar, doonin Tsarahazana, ay qayb ka ayaa si iskeed ah ku dhawaaqay inuu u Yimaaddo Pope ee uu jasiiradda Badweynta Hindiya, halka ka qayb November 2018 Vatican ee Synod loo soocay in ay dhallinyarada.
"Waa dhiirigelin qof walba, gaar ahaan dhallinyarada", ayaa faallo ka bixiyay prelate, abuuray kartid by Pope Francis ee May.
Kaarka Malagasy ayaa sharaxay in dhalinyaradu ay aad ugu lug lahaayeen nolosha kaniisadda. "Laakiin xaqiiqda ah in dhalinyarada ay la kulmaan halkan waa saboolnimo aad u daran, sharaxay kiniiniga. Waa shaqo la'aanta ka filaysa waxbarashadooda kadib, dareenka sababtoo ah musuqmaasuqa uu gangrene dalkeenna. Haddii aan lahayn kalsooni garsoorka, dhallinyaradu waxay ku hawlan yihiin rabshad iyo cadaalad caan ah ",
Sidoo kale akhri Madagascar, jadeecada ayaa 1 000 u geeriyootay tan iyo bishii Oktoobar 2018
Madagascar waa jasiiradda afaraad ee ugu weyn adduunka, iyada oo dusha sare ee 587 000 km2 illaa ku dhowaad 25 million dadka deggan. Xeerkan hore ee Faransiisku wuxuu madaxbannaanaa 1960 waa soo saaraha ugu horreeya ee vanilla ah adduunka.
Inkasta oo uu korayo, waddanku wuxuu leeyahay heerka saboolnimada xad-dhaafka ah ee 76,2% ee 2017. Qeyb ka mid ah caruurta da'doodu ka yar tahay 5 waxay ka jirtaa nafaqo-xumo ba'an, dhacdo ay kuhadalaan khabiiro si aad ah ugu tiirsanaanta bariiska. Madagascar waa 5e waddanka adduunka ee loogu talagalay tirada carruurta ka baxsan dugsiga. Jiilaal kasta oo ka mid ah jiilaalka, waddanku waxa uu la kulmay cudurka daacuunka, taas oo ka sii darnayd oo wuxuu ku helay magaalooyinka 2017, taasoo keentay dhimashada 200.
Cardinal Pietro Parolin, Xoghayaha Dawladda Sacuudiga See, ayaa booqday 2017 ee Madagascar bishii Janaayo si uu u calaamadiyo sannadihii 50 ee xiriirkii diblumaasiyadeed ee uu la yeeshay Vatican. Laakiin booqashada ugu dambeysa ee baadari ku saabsan jasiiradda ayaa ku soo laabanaysa John Paul II, laga bilaabo April 28 ilaa 1er laga yaabaa 1989.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/03/27/le-pape-au-mozambique-a-madagascar-et-a-l-ile-maurice-debut-septembre_5442215_3212.html?xtmc=pape&xtcr=5
Dalka Mareykanka, filimka anti-IVG wuxuu la kulmaa guulo dhab ah oo gudaha ah
Markhaati caalami ah oo ku eedeeyay in uu ka tirsan yahay ururka Al-Qaacida